Shir-weyne ku saabsan Soomaaliya oo ka furmay magaalada Brussels - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir-weyne ku saabsan Soomaaliya oo ka furmay magaalada Brussels
July 16, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Shir-weyne ku saabsan Soomaaliya oo ka furmay magaalada Brussels. [Sawirka: Twitter]
Brussels-(Puntland Mirror) Shir-weyne ku saabsan Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Shirka ayaa waxaa ka qeybgalay wufuud ka socota Soomaaliya oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibada Soomaaliya oo caalamiga ah.
Ammaanka, dimuqraadiyada iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa ah ajandaha ugu weyn ee shirka oo socon doona 16 ilaa 17 July.
March 9, 2018 Dowladda Puntland oo sheegtay in 1.6 milyan oo qof ay wajahayaan abaar
Maleeshiyada al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee Jimcada sheegtay in ay toogatay afar qof oo ay ku eedaysay jaajuusnimo, waxaana kamid ah qof la bireeyay oo ay ku eedeeyeen inuu warbixin [...]